Saldhigga Ankara iyo dhammaan dhismayaasha TCDD oo halis ku jira | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraXarunta Tareenka ee Ankara iyo dhammaan dhismayaasha TCDD ee khatarta
Xarunta Tareenka ee Ankara iyo dhammaan dhismayaasha TCDD ee khatarta
10 / 06 / 2016 06 Ankara, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
Saldhigga Tareenka ee Ankara iyo dhammaan dhismayaasha TCDD ayaa qatar ku jira: Isbeddelka heerka ugu weyn ee TCDD, dhammaan dhismayaasha TCDD iyo dhulal ay ku jiraan Saldhigga Ankara ayaa qatar ku jira.
shir jaraa'id oo todobaadle ah 4 June, si rasmi ah Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State daabacay wargeyska (TCDD) qiimaynta bedelka xaaladda ugu weyn ee Rugta Horseedayaashii Ankara Branch, oo ay la socdaan wax ka beddelka ee Ankara Station qaynuunkii, gaar ahaan Haydarpaşa iyo TCDD dhismayaasha ee gobollada oo dhan, saldhigyada ku jiraan cabsi. TCDD si gaar ah ayaa loo maamulay dhammaan dhulka iyo saldhigyada ayaa loo soo jiiday raasamaal. Dhismaha Saldhiga Ankara, oo ka dambeeya xarunta tareenka xawaare sare leh, wuxuu ku soo arkay xasuuqii ugu weynaa ee Jamhuuriyadda waxaan u maleyneynaa in dhismahan uu qatar ku jiro. ”
Tezcan Karakuş Candan, oo ah Madaxa Laanta Ankara ee Rugta Dhismaha ayaa yidhi, iyle Iyada oo la beddelayo maqaamka ugu weyn, qaab dhismeedka maaraynta ayaa isbeddelaya. Hantida TCDD waxay wajaheysaa geedi socodyo sida iibinta iyo kiraynta. Gobolku wuxuu gacanta ku hayaa dhammaan howlahaan wuxuuna qaadanayaa qaab sida kontaroolada. TCDD si buuxda ayaa loogu daray. Maareynta dalka shirkad ahaan waa qaab dhismeedka guud ee dowladda. Daloolka ugu dambeeya ee zurna waa TCDD. 64 wuxuu ku jiray barnaamijka dawladda. 65. Isla markii ay dowladdu timid, TCDD waxay beddeshay xaaladdeeda ugu weyn. Maanta, dhismayaasha TCDD iyo saldhigyada ku yaal Haydarpaşa, Saldhigga Ankara iyo dhammaan gobollada ayaa halis ku jira. Waa in la daayaa, bulshada looma jawaab celinayo waddan dhiig u qaada wadnaha markabka saliida qaada, ”ayuu yidhi.
Maqaalka ujeeddada ayaa muujinaya waxa ku dhici doona TCDD
Candan wuxuu siiyay macluumaadkan soo socda ee ku saabsan sida loo beddelayo xaaladda guud:
X 4 Jimcihii, Juunyo, Maamulka Tareenka Gobolka ayaa daabacay xaaladdiisa ugu weyn ee Gazette Rasmi ah oo ku saabsan beddelka heerka ugu weyn ee TCDD. Xaaladda ugu weyn waxaa ka mid ah sharciyeynta qaab dhismeedka lagu aasaasay magaca Agaasimaha Guud ee TCDD, qaab dhismeedka hay'adda, kaabayaasheeda iyo xubnaha ku xiran, iyo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo qodobbada ka soo baxa xisaabinta hanti-dhowrka iyo shaqaalaha iyo dhammaan arrimaha la xiriira hantida. Kaliya by reading shayga ee qodobkan ku dhici doona in TCDD, yht'n joogitaanka ee Boulevard Celal Bayar aanu ku nool nahay geedaha ka dib xasuuqii ee wax halis Ankara Station ee tareenka uu ku faafay dhamaan Turkey, dhulka, sida ay u dhici dhismaha, gaadiidka Sidee Privatizing doonista corporatized oo la liquidated lahaa show.
Waad dhiibtay madaxbanaanideena
Candan wuxuu dawlada ka codsaday inay joojiso dhaqankan wuxuuna yidhi:
“TCDD waxay leedahay dhul aad iyo aad u cajiib badan. Dhismooyinka saldhiga iyo dhul kasta oo ka gudba wadada tareenka waa hantida ugu weyn ee TCDD iyo dammaanad qaadka madax-bannaanida qaran. TCDD waa shabakada gaadiidka ee ugu muhiimsan waqtiga musiibada inta lagu gudajiray dagaalka. Haddii aad tanaasulid, waxaad iska dhiibtay madax-bannaanidiisa. Haddii aad shirkad wadaagto oo aad shirkad si gaar ah u sameysatid, jidadka tareennada ee shirkadaha lacagta leh waxay noqon doonaan marinnada tareenka, kaasoo aadi doona meelaha ugu xun ee geedi socodka madax-bannaanida mustaqbalkeenna iyo ku tiirsanaantaada. Waa maxay macnaheedu in dheecaanku? Wax kasta oo fahanka ah ee ku daadiya TCDD, waa la cabaa. Sababtoo ah gaadiidka xadiidka waa mid ka mid ah maraakiibta nolosha ee ugu muhiimsan dalkan. Wadooyinka tareenka ayaa ah qiimaha ugu muhiimsan ee waddamada oo dhan. ”
Waxaan u gudbinay dacwad cabasho ah geedaha la gowracay Celal Bayar Boulevard
Candan wuxuu kaloo xusey dilka geedaha Celal Bayar Boulevard ee loo adeegsaday YHT wuxuuna sii waday sida soo socota:
Teknoloji Teknoloji waxay horumar ku sameyneysaa gadaal tareenka TCDD, Saldhig Tareen Xawaare Sare ah oo loo dhisay fududeyn gaadiid, iyo dacwadihii ay soo gudbiyeen Rugta Dhismaha iyo rugta qaabbilaada howshaas ayaa naga soo horjeesatay, laakiin howshaasi si tartiib tartiib ah ayey ugu kordheen saldhigyada qaarkood, Etimesgut iyo xarumo kale. ilaa dhibco. In kasta oo saldhigga YHT uu ahaa ajendaha, geedaha ku yaal Celal Bayar Boulevard ee horreeya saldhigga YHT ayaa mid mid loo gooyay. Geedka u dhawaa 150 waa la xasuuqay. Mid kasta oo ka mid ah wuu ka da 'weynaa 60, iyo YHT waa la joojiyay jiilaalkii Gezi iyadoo la raacayo qaab teknolojiyad ahaan loo hagaajinayo isu socodka magaalada iyo geedi socodka dhulka ee neoliberalism. Anaga Rugta Ankara ee naqshadeeyayaasha, waxaan soo gudbinay dacwad dambi.
Halganka isdhaxgalka in la fuliyo
Candan wuxuu kaloo xasuustaa in markii ay tahay laanta Ankara ee Rugta Dhismaha Architects, ay bilaabeen mashruuc marqaati ah qaab dhismeedka adeega bulshada guud ee 2003. Midkii ugu horreeyay wuxuu ahaa hannaanka qulqulka ee bangiyada gobollada, kaas oo waqtigaas laga wada hadlay. Turkey ma ahayn tusaale ahaan keliya ee dunida. Shaqadeenii ugu horaysay waxay ahayd qaabdhismeedka bangiga gobolka ee hanjabaada ka dibna adeegyada tuulada .. Maanta waxaan haysannaa kayd keli ah oo aan ka heli karno adeegyada tuulada maxaa yeelay waxay u direen qaybo badan oo ka mid ah adeegyada keydka tuulada SEKA. Qolkii waa dhammaaday. Daraasaddeenna saddexaad waxay ahayd TCDD. Waxaan haynaa tiro badan oo kayd ah sababta oo ah shaqada aan qabanay mudadaas. Waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in loo qaado ilaalin guud. TCDD si loogu badalo in ay siyaasad guud ee la dagaalanka iyo cirib dhulka dheeraadka ah ee guud ahaan Turkey waa in ay fuliyaan waxbarashada wadajirka ah, maaddooyinka lahaa in uu noqdo mid ka mid ah ajandaha ugu weyn ee Rugta Horseedayaashii, "ayuu yiri.
Dhulka TCDD waxaa loo jiiday caasimada
Xoghayaha Rugta dhismaha ee Ankara Gökhan Yıldırım ayaa muujiyay dareenkiisa sida soo socota:
“Adeeg ay tahay inay dawladdu siiso dadkeeda marka lagu daro caafimaadka iyo guryeynta. Ku-shaqeynta gaarka ah ee adeeggan ayaa la macno ah in waddanku marayo waji kale. Waxaan dareemi karnay howsha kali kadhiga ee TCDD bilowga. Qorshe aan lagu guuleysan ayaa gobolka waxaa ka sameeyay dhanka gaadiidka sida metro. Dhanka kale, gawaarida gaashaaman sida YHT, oo bixiya kirada, ayaa iyaguna galay ajendaha. Waxa jira goobo dayactir iyo tas-hiilaad dayactir ah oo ku sii socda goobta Warshadda Sonkorta ee Etimesgut, iyo sidoo kale dhisme weyn oo xarun-adeegsi isku dhafan oo ku yaal degmada Gar. Si wada jir ah ayaan u aragnay sida ay tani u shaqeynayso waqti ka dib. YHT waxay ahayd mashruuc aan qorshaysnayn bilowgii waxayna ahayd mashruuc ku saabsan jidadka tahriibka shimbiraha taas oo keentay in la xasuuqo kumanaan shimbirood oo wata marin kasta. Waxaan aragnaa in ujeedada kiradaan aysan ku filneyn oo dhammaan dhulalka TCDD si gaar ah ayaa loogu qaatey qaab ay isku dayayaan inay ka baxaan caasimada. Tani waa mid laga naxo. Waxaan sii wadaynaa inaan dhahno gaadiidku waa xuquuq aasaasi ah oo ay tahay in dowladdu raadsato. ”
Dhismayaasha khatarta ah ee ka yimaada Saldhiga Tareenka ee Ankara
Qorshaha Badalka Dhammaan Marmara Under Control
Xusuusinada Garage Garage ayaa noqon doona Hagaajin
Madaxweynaha Ahmet Soguk: Waxaan xitaa khatar ku ahaa TÜVASAŞ!
Khatarta jidka tareenka ee loogu talagalay Palace Topkapi
Khatarta lagu soo oogey gawaarida haweeneyda ku jirta mareerrada magaalada Bursa waa mid aan sal lahayn
Shimbiraha 3. U hanjabaadda garoonka diyaaradaha?
Dhibaatada Gaadiidka iyo Bii'ada ayaa Dhibaatooyinka Dunida Dhibaatada ku haysa
Izmir Metro Inc. U diyaarso shaqaale dhib badan
Sameeyey Lacagta for Canal Istanbul ee Turkey iyo dunida? Lumay? Fursad? Hanjabaad?
Hawlgallada Dhismaha ALTA wuxuu sii socdaa xawaare buuxa
Maaddaama buundada buundadu ay xiran tahay Mecidiyeköy, dhammaan imaanshahooyinka iyo bixitaannadu waa kuwa sareeya…
Xagee joogaa Xarunta Tareenka High Speed ​​Speed ​​Station? Sidee loo aadaa Ankara Station Speed ​​Centres Station?
TÜVASAŞ ayaa awood u leh inuu soo saaro dhamaan gaadiidka tareenada gudaha iyo kan qaranka
Xarunta Istaraatiijiga Ankara
Rugta Farsamada Architects Ankara
Garoonka diyaaradaha ee EXPO Tram Expeditions ayaa la bilaabay
Go'aankii la wareegidda ee khadka tareenka ee Dudullu-Bostane